ထိုင်ပေမြို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်သီးသန့်ကဏ္ဍမြန်မာဘာသာ-ပြင်းထန်သောအထူးကူးစက်ကပ်ရောဂါအဆုတ်ရောင် (COVID-19 အတိုကောက်ဝူဟန့် အဆုတ်ရောင်) ဇုန်-ထိုင်ပေမြို့ရပ်ရွာကောလိပ်/သက်ကြီးရွယ်အိုစင်တာ/သက်ကြီးရွယ်အိုများကျောင်းဖွင့်ပွဲလမ်းညွှန်များ
110 ခုနှစ်9လ 1 ရက်မှစတင်အကောင်အထည်ဖော်
1. ရပ်ရွာကောလိပ်：ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသောပညာရေးဝန်ထမ်းများ(သို့)ရပ်ရွာ ကောလိပ်၌14ရက်ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသူများသည်ဦးဆုံးအကြိမ် ဝန် ဆောင်မှုများမပေးမီ3ရက်အတွင်းအမြန်စစ်ဆေးခြင်း(သို့) PCRအနုတ်လက္ခဏာလက် မှတ်ကိုပေးပြီး 3-7ရက်တိုင်းအမြန်စစ်ဆေးမှုမှန်မှန်လုပ်ရမည်။
2. သက်ကြီးရွယ်အိုစင်တာ、သက်ကြီးရွယ်အိုကျောင်းများ：ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသားများကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသူများ (သို့) ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီး14ရက်မပြည့်သေးသူများ၊ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးစွာမပေးအပ်မီ(သို့) လက်ခံခြင်း မပြုမီ3ရက်အတွင်းအမြန်စစ်ဆေးခြင်း(သို့)PCRအနုတ်လက္ခဏာလက်မှတ်ပေးသင့် သည်။
3.စာသင်ခန်းဧရိယာသည်သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုနုတ်ပြီး 2.25မီတာ အရလူဦးရေကိုတွက်ပါ။
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2021-09-01 15:49